Ngaphandle ngoku! NgoSeptemba-Okthobha u-2021 upapasho lweeVidiyo zaBagcisa abaBonwayo | Iphepha leendaba laBagcisa abaBonakalayo kwi-Intanethi
Ikhaya » iintlelo » 2021 05 Septemba / Okthobha » Ngaphandle ngoku! NgoSeptemba-Okthobha u-2021 upapasho lwephepha leendaba lababonisi
UAnna Spearman, 'Amalungu aKhululekileyo', umbono wofakelo, iZiko lobuGcisa laseRoscommon; Ifoto nguDickon Whitehead, ngoncedo lomculi kunye neRoscommon Arts Centre.
Ukubhiyozela ukudibana ngokwasemzimbeni nobugcisa- kunye nendima yokubhala ekurekhodeni la mava - lo mba ujolise phantse ngokukodwa kwimiboniso emininzi enomdla neyenzileyo eyenzeka kwilizwe liphela kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo.
Phakathi kweeprofayili ezininzi zoMboniso, uMary Flanaghan udliwano-ndlebe nomculi u-Anna Spearman malunga nomdlalo wakhe wedwa we-solo, 'iiLoose Parts' eRoscommon Arts Centre; UGqirha Yvonne Scott ucinga ngomboniso kaMary-Ruth Walsh, 'SKIN DEEP'; Kwaye uDavey Moore ucacisa umboniso weqela lakutshanje, 'i-Double Estate' kwiPearse Museum, ebonisa imisebenzi evela kwi-OPW State Art Collection.
Ukongeza, uJane Morrow uphonononge uthotho lomboniso lwamva nje, 'Iimpawu eziPhakathi' kwiFlak Art Studios, ekhethwe nguEdy Fung; Igalari yaseLuan ichaza imibuzo ethembekileyo yomboniso wabo wangoku, 'Queer As You Are'; USinéad Keogh uxoxa ngemibuzo ekhokelwa ngumlondolozi exhasa 'Ndiyinto endiyiyo' e-Ballina Arts Centre; kunye noGqirha Barbara Dawson babonakalisa isikhumbuzo seminyaka engama-20 seprojekthi kaFrancis Bacon Studio.
Phakathi komsitho wokugubungela lo mbandela, ikholamu kaMichael Hill ithathela ingqalelo isandi esikhulu semiboniso yobugcisa yamazwe aphesheya njengeVenice Biennale, uJennifer Redmond uphonononge inkqubo yobugcisa beCork Midsummer Festival 2021, kwaye uGwen Burlington uthathela ingqalelo eminye yemisebenzi yobugcisa eboniswe ngexesha lesibini isigaba se-EVA International.
Ukuphononongwa kwicandelo leCritique zezi: 'Isidima sikaSweeny' kwiziko lobugcisa iAn Táin; 'Incoko igqityiwe, akukho mntu uthe uLizwi', umboniso wabantu ababini noColin Darke kunye no-Yvonne Kennan eBelfast Vuliwe; UClaire Murphy, 'Nanku apho ndikhoyo' kwiZiko lobuGcisa laseMzantsi Tipperary; 'Ubulolo bokuba ngumJamani', umboniso wabantu ababini kunye noVera Klute kunye noThomas Brezing kwiLigalick City Gallery yeArt; kunye 'ne-Maternal Gaze', inkqubo yokukhangela kwi-Intanethi kwi-IMMA.
Kwikholamu yokugqibela yePlein Air kaCornelius Browne, 'Abapeyinti kwiMithi', ubonakalisa ukupeyinta nabantwana bakhe kufutshane nasekhaya, ngelixa uMiguel Amado exoxa ngengqokelela, amafa okoloniyali kunye 'nobugcisa obuvela kwenye indawo'. UJohn Graham uchaza imiba ephambili yenkqubo yakhe yokuzoba kwikholamu yakhe yezakhono, kwaye uAnn Quinn uxoxa ngemizobo yakhe yamva nje, ukuba iboniswe kumboniso ozayo wedwa eTaylor Galleries.
Iiprofayili zamalungu e-VAI zibandakanya udliwanondlebe lukaCarolann Courtney noJohn Conway malunga nokuziqhelanisa nokuziphatha kwakhe kwezobugcisa, kunye nokubonakaliswa kukaIngrid Lyons kufakelo olwenziwe mva nje nguLiliane Puthod.
Ukugxila kwengingqi kulo mbandela kuvela kwi-County Waterford, kunye nemibono yombutho evela kuSíle Penkert (uMlawuli oLawulayo, iZiko lobuGcisa laseGarter), uPaul McAree (uCurator, uLismore Castle Arts), uClaire Meaney (uMlawuli, weWaterford Healing Arts Trust) kunye noJenna Whelan (UMlawuli, igalari ye-GOMA yoBugcisa baNgoku), ngelixa amagcisa abonakalayo uClare Scott kunye noSara Lincoln bebonakalisa ubunyani bokugcina ubugcisa obubonakalayo kuloo mmandla.